Phantse zonke zokungcakaza engundoqo USA, iunited Kingdom, Swiden, Australia kunye namanye namanye amazwe kweli phawu ehlabathini Baccarat okanye Punto Banco. Lula yenye yezona ethandwa Casino imidlalo lonke ixesha. Umdlalo kuyinto elula ukuqonda. Kukho amaqela amabini okanye izandla inxaxheba umdlalo Baccarat Lo mdlali ngesandla kunye bhanki okanye ngesandla umthengisi lowo. Ukuze eyodwa nje kufuneka ukuqikelela isandla ukuthi win ngob.
Casino ezininzi abashishina nabaqhubi zidlala indima kumthengisi kwi umdlalo lo gama ezinye yaku kuvumela enye abadlali ukuba andaz umnqwazi.
Online Baccarat into efanayo naleyo imincili. Umahluko kuphela kukuba yonke uba virtual. Kumthengisi naye endaweni lowo virtual ezenzekelayo. Kufuneka ukhethe ukubheja kwakho isandla yokuwina Wena nje. Ngamanye amaxesha abathengisi kunye abadlali ukunxibelelana ngokusetyenziswa eyakhelwe ingxoxo virtual okanye ukudluliselwa ividiyo.
ukuba saba njani?
Tempo Banco okanye Baccarat isetyenzwa ukusuka isihlangu equlathe 4, 6, okanye 8 kwayo amakhadi washixiza kunye. Kumthengisi okanye umdlali ndingcatsha zokuqala azibize ukubheja kwi zombini izandla. Ngokuqhelekileyo abantu badla ukuba ukhethe bhanki njengoko liye inzuzo ngokwezobalo ngesandla umdlali lowo. Lithetha ukuba iyaluphumelela isandla bhanki izihlandlo ngaphezu lomdlali oyiphetheyo. Xa wenza kubheja amaqosha azotywe amakhadi. Kumthengisi lokuqala ubonisa amakhadi le bhanki ukuba umdlali ukuba babheje esandleni lomdlali oyiphetheyo. Xa umdlali ubonile ukuba wazibhukuqa amakhadi kunye ophumeleleyo uvakaliswa.
Kukho e eyakhelwe ithuba ukuya yaku esandleni le bhanki lowo nakuba. 5% kuzo zonke win Wayethandwa ukubheja esandleni le bhanki, ukuba uyehla na ukuya yokungcakaza njengoko umsebenzi.
Kodwa ke kukho enye into ukukhumbula. Umdlali obambeleyo umthengisi ifana nayiphi na umdlali idlala yekhasino. Yena okanye akayoyikeli unoxanduva okanye unoxanduva lokuhlawula winile wenza ukubheja nxamnye nomthengisi. Kuyinto ekuyo ukuba kufuneka ahlawule ukubheja.
Loo nto yonke into Baccarat. Kuyinto enye umdla kakhulu, imidlalo ikhadi umdla kwaye imincili macala. Ukanti ilula ukuze, apho ubuxoki bubuhle. Ngoko ke, ukuba ukhe ufumane ithuba lokudlala Baccarat nangayiphi na indlela ukuba baphile okanye online, sukuphoswa yiyo! Asinto ngemihla ukuba ufumana ukudlala ezo imidlalo eyonwabisayo umdla online! Ukuzisa yekhasino kuwe, kwizixhobo zakho kakhulu! Ngoku ke revolution sonke uthando!